Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Howl-gallo Ka Socda Magaalada Boosaaso. – Idil News
BOOSAASO(IDIL NEWS)-Wararka ka imaanaya Magaalada Boosaaso ee Xarunta Ganacsiga Dowladda Puntland, ayaa Sheegaya in Magaaladaas ay Saacadihii ugu dambeeyay ka socdeen Howl-gallo culus oo lagu Xaqiijinayo Amniga.
Howl-galadaan ayaa yimid ka dib markii Xalay Magaalada uu ka dhacay Weerar toos iyo Bumbo gacmeed Isigu jira oo lagu Qaaday Maqaaxi ay ku Sugnaayeen Labo askari oo ka tirsan Ciidamada Amniga Magaalada Boosaaso, kaas oo uu ku geeriyoodeen Hal Askari, Labo kale oo mid askari yahayna ay ku Dhaawacmeen.
Howl-galadan oo ay sameynayaan Ciidanka Amaanka ee Dowladda Puntland ayaa waxa ay ka socdaan xaafadaha ay ka kooban tahay Magaalada Boosaaso, Iyadoona Ciidamadu ay guri guri u baaraya Xaafadaha, waxaana shacabka ay weydiinayaan aqoonsi iyo cida taqaana.
Ma jirto Illaa Haatan Cid si rasmi ah loogu Qabtay Howl-galkaan, hase ahaatee Ciidamada ayaa galaya inta badan guryaha ku yaalla Boosaaso, waxaana la filayaa in Marka Howl-galku soo gaba-gaboobo ay ka hadlaan Laamaha ammaanka Dowladda Puntland.